Amaphilisi okwakhiwa kwamadoda - 50%
Home » Amaphilisi okwakhiwa kwamadoda
Kunezithako eziningi zamakhambi emakethe namuhla ezandisa ukusebenza kwezocansi nokwaneliseka. Umuntu angakhetha kanjani ukuthi iyiphi yale mikhiqizo okufanele ayizame?
Ukuzama ukuhlela izincazelo ezahlukahlukene kungadla isikhathi futhi kuphazamise.
Ngakho-ke, lapho ucwaninga ezweni lezithasiselo zocansi lwamakhambi, kubalulekile ukwazi imininingwane eyisisekelo ephathelene namakhambi.
Lapho ufuna amakhambi, kubalulekile ukuthola eyodwa ethi iwela ngaphansi kwesigaba se-herbal Se supplements.
I-Se imele ukukhishwa okumisiwe, okusho ukuthi izithako zilinganiswa ngokucophelela futhi zenziwe ngendlela yokuthi ithebhulethi noma i-capsule ngayinye iqukethe ingxenye efanayo yezithako.
Ezinye izithako zemithi azihlinzeki ngale nqubo ebalulekile; ngakho-ke, amanani ayohluka, noma ebhodleleni elilodwa.
Ukuze uzuze imigomo efana nokwandiswa kwepenisi, ukwanda kwesibalo sesidoda, noma isifiso sobulili esandisiwe, ukufakwa kwe-herbal Se supplements kuyisihluthulelo. Nganoma yini enye, imiphumela izohluka ngenxa yokwehluka kwemithamo ethathwa nsuku zonke.
Lapho imithamo ihluka, imiphumela engaguquguquki iba nzima kakhulu, uma kungenakwenzeka, ukuyifinyelela.
Isibonelo esihle sezithako ze-herbal Se zingatholakala ngokucwaninga izengezo ezifana neVig-Rx.
Kunezithako eziningi ze-herbal Se ezitholakalayo, futhi ukuthola ukuthi yikuphi okulungele izidingo zakho kumane kuyindaba yocwaningo. Izimpande zeMaca seziyisengezo esithandwayo sezocansi samakhambi.
Uma ihlanganiswa nama-amino acid, le ngxube ngeke iholele ocansini oluthuthukisiwe kuphela, kepha futhi izokhuphula nokukhiqizwa kwesidoda. Lapho uthenga izithako zokuya ocansini ngamakhambi, funa lezo eziqukethe lezo zithako ezibalulekile bese uzama ukuthola eyodwa enikeza namavithamini.
Ukuthola izithako ezilungile kusuka kusengezo esisebenzisa inqubo yokukhishwa emisiwe kuzoqinisekisa ukuthi usebenzisa umkhiqizo wekhwalithi, okuholela emiphumeleni emihle kakhulu.
Lapho ucwaninga ngesengezo esifanele ongasisebenzisa, into yokuqala okufanele uyibheke ukuthi ngabe izithasiselo ezifundwayo zingamakhambi we-herbal Se.
Uma kungenjalo, ngakho-ke ungachithi isikhathi noma imali ngazo.
Kuneminye imikhiqizo eminingi kakhulu etholakalayo efakazelwa ukuthi iyasebenza ngaphandle kokuchitha umzamo kulawo ma-supplements enziwe ngamazinga angaphansi kwekhwalithi.
amaphilisi okuthuthukisa abesilisa, umkhiqizo omuhle wokuthuthukisa owesilisa, inkinga yokwakhiwa, izithasiselo zokwakhiwa, ukwenza ngcono idrayivu yezocansi, i-capsule yezocansi yamadoda